Hurun သည်တရုတ် ၏တန်ဖိုး အရှိဆုံး ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၅၀၀ ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် – Pandaily
Jan 19, 2022, 19:24ညနေ 2022/01/19 23:22:56 Pandaily
Hurun Institute မှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် တန်ဖိုး အရှိဆုံး ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများတရုတ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရပိုင် မဟုတ်သည့် ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ စာရင်းတွင် တန်ဖိုး အရ အဆင့်သတ်မှတ် ခံရသည်။ Tencent သည်တရုတ် ၏တန်ဖိုး အရှိဆုံး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာပြီး Hurun China 500 ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ၀၉ ဘီလီယံ တန်ဖိုး ဖြင့် ဦး ဆောင် နေသည်။
Semiconductor ကုမ္ပဏီကြီး TSMC သည်ဒေါ်လာ ၅ ၇၇ ဘီလီယံ ဖြင့် ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ အလီ ဘာ ဘာ ၏တန်ဖိုး သည်တစ် နေရာမှ တတိယ နေရာ သို့ကျဆင်းသွားသည်။ Bytedance ၏တန်ဖိုး သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က သုံးဆ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ငါး နေရာမှ စတုတ္ထ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ CATL သည် ထိပ်ဆုံး ၁၀ နေရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၆ နေရာ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် တန်ဖိုး ၂. ၅ ဆတိုး ပြီး ဒေါ်လာ ၂ ၃၃ ဘီလီယံအထိ ပဉ္စမ နေရာတွင်ရှိသည်။
စာရင်း တွင်ပါ ၀ င်ရန် တံခါးခုံ သည် ယခင်နှစ် ထက် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Bytedance, CATL နှင့် Meituan တို့ ဦး ဆောင်သော ကုမ္ပဏီ ၃၄ ခု၏ စျေးကွက် တန်ဖိုးသည် နှစ်ဆ ကျော်တက် ခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နှင့်စွမ်းအင် သည်သိသိသာသာ ကြီးထွား လာပြီး ထိပ်ဆုံး ကဏ္ sectors နှစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ Tal, Evergrande Group နှင့် Huahai Pharmaceutical အပါအ ၀ င် တိုင်းရင်း ဆေး နှင့် ဆေးဝါး လက်လီ ရောင်းဝယ် မှု၊ အိမ်ခြံမြေ နှင့် ပညာရေး ကဏ္ sectors များတွင် အကြီးမားဆုံး ကျဆင်းမှု ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရှန် ဟို င်းသည် ဘေဂျင်း ကိုကျော် တက်ပြီး စာရင်းတွင် ကုမ္ပဏီ အများဆုံး ရှိသော မြို့ ဖြစ်လာသည်။ နောက်ထပ် ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု ထပ် ပေါင်း ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း ကုမ္ပဏီ ၆၉ ခုရှိသည်။ ပေ ကျ င်းသည် ကုမ္ပဏီ ၂၅ ခု ဆုံးရှုံး ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၆၈ ခု သို့ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ ရှန်ကျန်း သည် အဆင့် ၄၅ ဖြင့် တတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး Hangzhou နှင့် Hong Kong တို့က ၃၀ စီ နှင့် တိုင် ပေ ၂၄ ခုရှိသည်။ Hurun China 500 ၏ ထက်ဝက် သည်ဤ မြို့ကြီး ခြောက် မြို့တွင် စုစည်း ထားသည်။
Hurun China 500 ၏ပျမ်းမျှ အသက် မှာ ၂၅ နှစ်ခန့် ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ၃၄ ခုသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် သမိုင်း ရှိခဲ့ပြီး ၅ ခုမှာ နှစ် ၁၀၀ ကျော် သမိုင်း ရှိခဲ့ပြီး အားလုံး သည်ဟောင်ကောင် မှဖြစ်သည်။ ယင္း တို႔ အနက္ ရွစ္ ဦးမွာ အသစ္ အဆ န္း မ်ားျဖစ္ၿပီး RELX Technology ႏွင့္ Dingdong Mayback အပါအ၀င္ ငါးႏွစ္ မျပည့္ မီ တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၈၈% သည် စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ များဖြစ်ပြီး ၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ရှန်ကျန်း နှင့် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း များသည် ၁၄၃ နှင့် ၁၄၂ အသီးသီး ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ များအတွက် ဦး စားပေး စာရင်း များဖြစ် နေဆဲ ဖြစ်ပြီးနောက် ဟောင်ကောင် စတော့အိတ် ချိ န်းက ၁၁၉ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် မှာ နာမည် ၂၇ ခု ထည့် ထားတယ်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Huawei သည် Hurun China ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း များ၏ SDG အဆင်သင့် ဖြစ် မှု ၁၀၀ တွင် ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိသည်
Hurun Report ၏ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် သုတေသန အကြီးအကဲ Hu Run က “ Hurun China 500 ကုမ္ပဏီ သည်တရုတ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ of ၏ ကျောရိုး ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသော စီးပွားရေး သြဇာလွှမ်းမိုး မှုရှိသည်။ ၎င်း တို့အကြား နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ မှာဒေါ်လာ ၃. ၇၅ ထရီလီယံ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရုတ်၏ နှစ်စဉ် ဂျီဒီပီ၏ လေး ပုံတစ်ပုံ နှင့်ညီမျှ ပြီး လူ ဦး ရေ ၁၁ သန်း ခန့်ရှိသည်။ Covid ၏ လွှမ်းမိုး မှုရှိ လင့်ကစား သူတို့သည် ကြီးထွား ရန် စီမံ နိုင်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က ကပ် ရောဂါ စတင် ဖြစ်ပွား ချိန် မှစ၍ သူတို့၏ ပျှမ်းမျှ တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံ သို့ နှစ်ဆ ကျော်တက် ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၄. ၇ ဘီလီယံ မှ ၁၀. ၃ ဘီလီယံ အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ “